Amanqaku kaEmily Johnson Martech Zone |
Amanqaku ngu UEmily Johnson
U-Emily Johnson ngumcebisi wentengiso oneminyaka eli-10 yamava ekwenziweni kwezicwangciso zokuthengisa. Okwangoku, uyintloko yesebe lentengiso e Imithombo yeendaba eblue, Inkampani edumileyo yesisombululo sedatha ye-B2B esekwe e-Irving, eTexas.
NgoLwesibini, Matshi 31, 2020 NgoLwesibini, Matshi 31, 2020 UEmily Johnson
Iifemu ze-B2C zithathwa njengezona zibalekayo kumalinge okuhlaziya abathengi. Iindlela ezahlukeneyo ezinje nge-e-commerce, imithombo yeendaba kwezentengiso, kunye nentengiso yeselfowuni ziye zenza ukuba amashishini lawo enze ukuthengisa kunye nokunikezela ngeenkonzo ezigqwesileyo kubathengi. Ngokukodwa, idatha ebanzi kunye nohlalutyo oluphambili kusetyenziswa iinkqubo zokufunda ngomatshini zenze ukuba izicwangciso-qhinga ze-B2C zikubone ngcono indlela yokuziphatha kwabathengi kunye nemisebenzi yabo ngokusebenzisa iinkqubo ezikwi-Intanethi. Ukufunda ngomatshini kukwabonelela ngesakhono esikhulayo sokufumana ukuqonda kubathengi beshishini. Nangona kunjalo, ukwamkelwa ziifemu ze-B2B